Light Therapy Box ကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ သင်၏လွယ်ကူသော ၀ ယ်ယူနည်းလမ်းညွှန် (၂၀၁၉) - ကျန်းမာရေး | ဇန္နဝါရီလ 2022
ဖျော်ဖြေရေး ကုန်ပစ္စည်း ရပ်ရွာ၊ သတင်း၊ ပြင်းထန်သောအားကစား ကုမ္ပဏီသတင်း အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေး ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကျန်းမာရေး ဆီးဂိမ်း
အဓိက >> ကျန်းမာရေး >> Light Therapy Box ကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ သင်၏လွယ်ကူသော ၀ ယ်ယူနည်းလမ်းညွှန်
Light Therapy Box ကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ သင်၏လွယ်ကူသော ၀ ယ်ယူနည်းလမ်းညွှန်
အအေးပိုသောလများနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှလူတို့သည်သူတို့၏အလင်းရောင်ကုထုံးသေတ္တာကိုပိုများလာသည်။ သင်စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ ဒါမှမဟုတ်အမြဲလိုလိုအားအင်ကုန်ခန်းနေသလား။ သင်တစ် ဦး လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၁၀ သန်း ရာသီစိတ်ကျရောဂါရှိသူများ သင်လည်းအလင်းရောင်ဖြင့်ကုသနိုင်သည်။
1 lux သည်တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် 1 lumen နှင့်ညီမျှသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် lux သည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဧရိယာတစ်ခုတွင်အလင်းပြင်းထန်မှုဖြစ်သည်။
ပျမ်းမျှနွေ ဦး နေ့တွင်နေရောင်သည် ၁၀၀၀၀ lux ကိုဖြာထွက်စေသည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာ။ ပျော်ရွှင်သောဗီတာမင် D နှင့်နေရောင်ခြည်ပမာဏဖြစ်သည်။ နွေရာသီတွင်နေရောင်သည် ၁၀၀၀၀၀ lux အထိပြင်းထန်နိုင်သည်။ သို့သော်ဆောင်းရာသီ - ပျမ်းမျှဆောင်းရာသီနေ့၌နေရောင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အား ၁၀၀၀ သာ ပေး၍ ညတွင်မည်သည့်ည၌မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် ၀.၀၀၀၁ lux သာရှိသည်။
ထို့ကြောင့် Seattle၊ Portland၊ Alaska နှင့်ကနေဒါကဲ့သို့နေရာများသည်ရုန်းကန်နေရသူများစွာကိုတွေ့ရသည် ရာသီပေါ်ထိခိုက်စေသောရောဂါ (SAD) မရ။ ဤနေရာများသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောရာသီဥတု၊ ကာလတိုများနှင့်အမှောင်လများအထိကြာမြင့်သည်။ သင်လူအများစုနှင့်တူပါက SAD လက္ခဏာများသည်ဆောင်း ဦး လများတွင်စတင်ပြီးဆောင်းရာသီကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းသည်။ နွေရာသီစိတ်ကျရောဂါဟုခေါ်သောပြောင်းပြန်သည်သာမန်အားဖြင့်နည်းပါးသော်လည်းရှိနေသေးသည်။
SAD ရောဂါရှာဖွေရန်လူတစ် ဦး သည်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံရမည် အဓိကစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှု အနည်းဆုံးရာသီနှစ်နှစ်နှင့်တိုက်ဆိုင်သည်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ၄ ဆပိုများပါတယ်။
SAD ကိုအေးသောရာသီဥတုနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုအများအားဖြင့်ယုံကြည်ကြသော်လည်း၎င်းသည်နေ့အလင်းရောင်ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ဦး နှောက်တွင်ဓာတုမညီမျှမှုဖြစ်သည်။
သင့်တွင် SAD ရှိသည်ဟုသင်ထင်လျှင်သင်၏ဆရာဝန် (သို့) စိတ်ရောဂါအထူးကုနှင့်ရက်ချိန်းယူပါ။ Light box ကုထုံးသည်ဆေးဝါးမပါသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းပိုမိုပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အခြားကုထုံးပုံစံများလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများသည်တောက်ပသောအလင်းရောင် ၁၀၀၀၀ ကိုရရှိသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်၌ melatonin နှင့် serotonin ပမာဏကိုအဆင့်တက်စေသောအချက်အချို့ကို ဦး နှောက်သို့ပို့သည်။ နေရောင်ခြည်သုံးမီးအားကုထုံးအဖြစ်သုံးရန်သင်၏မျက်လုံး၌အလင်းရောင်လိုအပ်သည်။ မင်းကတိုက်ရိုက်ကြည့်စရာမလိုဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းအလင်းကမင်းနဲ့အရမ်းနီးတယ်၊ မင်းမျက်လုံးကအဲဒါကိုထိတွေ့တာသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များကိုစစ်ထုတ်ထားသောကြောင့်နေကာမျက်မှန် (သို့) နေကာမျက်မှန်တပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အလင်းကုထုံးသည် SAD ရှိသူများအတွက်သာမဟုတ်ပါ။
UVB အလင်းရောင်၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများသည်လက်တွေ့အားဖြင့်အဆုံးမရှိပါ။ နေ့စဉ်နေရောင်ခြည်ရရှိခြင်းသည်ကျန်းမာသောသွေးစီးဆင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်။ မီးဖွားကုသမှုသည်မီးဖွားပြီးနောက်တွင်ကူညီသည်။ SAD မရှိရင်တောင်မင်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကပိုကောင်းလာပြီးမင်းမှာစွမ်းအင်ပိုရလာမယ်။
အချို့ရှိပါတယ် ခေတ်မီမျက်မှန် သင်၏ circadian ရစ်သမ်အတိုင်း လိုက်၍ နံနက်ခင်းကိုသဘာဝအတိုင်းနိုးထရန်ကူညီသည်။ သင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်၌အလိုအလျောက်ဖွင့်ပေးသောကြောင့်ဤကုထုံးမီးလုံးကို smart plug ဖြင့်သုံးနိုင်သည်။
အိပ်ချိန်နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုဘေးဖယ်။ အလင်းကုထုံးသည် ecxema, psoriasis နှင့် vitiligo ကဲ့သို့သောအရေပြားအခြေအနေများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်သည်။
ညဘက်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ၊ အိမ်ထဲမှာပဲအချိန်အများကြီးသုံးတာ၊ တီဗီတွေအများကြီးကြည့်တာကငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖို့လိုအပ်တဲ့တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တွေချို့တဲ့နိုင်တယ်။ ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အကျွံအိပ်ခြင်း၊ အလွန်အကျွံစားခြင်းနှင့်မောပန်းခြင်းသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ခြင်းတို့ကိုခံစားရနိုင်သည်။
ဒါကို Light box ကုထုံးနဲ့ငါတို့ကတန်ပြန်တယ်။ ပြီးတော့အဲဒါနဲ့…
The Luxor: 10,000 Lux Light Therapy Pyramid, အဖြူရောင် Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အလှဆင်ခြင်း၊ အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ကြီးမားပြီးခေတ်မီသည်
စျေးနှုန်း: ၁၇၉.၂၇ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
NEW HappyLight Touch 10,000 Lux LED One-Touch ကုထုံး Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဘက်မလိုက်သောဝေဖန်မှုများ၏ ၁၀၀% သည်အပြုသဘောဆောင်သည်
Alaska Northern Lights မှ Northstar 10,000 Lux Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ကြီးမား၊ တောက်ပ။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်
ထိပ်တန်းဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှု
စျေးနှုန်း: ၂၉၉.၇၇ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
15,000 Lux, A5 -Size, Happy Natural Sun Lamp - အဖြူရောင် Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
dimming options များနှင့်အတူ 15,000 lux အထိ
လှပ၊ ပါးလွှာ၊ ကျစ်လစ်သောဒီဇိုင်း
လှုံ့ဆော်ထားသောသဘာဝအလင်းရောင်- UV ကင်းစင်သည်
စျေးနှုန်း: ၃၃.၅၅ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
Light100 အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် TL100: 2-in-1 Sun Lamp/Mood Light Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
LED သည်ကြာရှည်ခံပြီး Eco-friendly ဖြစ်သည်
စျေးနှုန်း: ၁၀၂.၉၉ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
1. The Luxor: 10,000 Lux Bright Light Therapy Pyramid Lamp, Northern Light Technologies မှအဖြူရောင်
စျေးနှုန်း: ၁၇၉.၂၇ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ထိပ်တန်းအဆင့်တွင်ရှိပြီးမကျေနပ်သောသူများပင်လျှင်မြန်ပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးပြီးနောက်ကျေနပ်သည်။
ပုံစံသည်အခန်းနေရာချထားရန်ခက်ခဲစေသည်။ ၁၅x၁၅x၁၅ လက်မအရွယ်အစားရှိသောအလင်းကုထုံးသေတ္တာတစ်ခုအတွက်အတော်လေးကြီးမားသည်။ ဒါကိုမင်းသိသွားရင် (လူအတော်များများက pro တစ်ယောက်ရဲ့အရွယ်အစားကိုစဉ်းစားကြတယ်)၊ ဒါကအငြင်းပွားစရာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်ဤအရာသည်လူအများစုစိတ်ဆိုးစေသောအရာဖြစ်ပုံရသည်။
Amazon ၏ထုပ်ပိုးမှုသည်အနည်းငယ်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ထုတ်ကုန်၏အပြစ်မဟုတ်ပါ
ရိုးရှင်းမှုအတွက် function နှင့်ဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားသောမည်သည့်အရာမဆိုအဓိကအနိုင်ရသည်။
အလင်းရောင်နည်းပညာတွင်အဆင့်မြင့်ဒီဂရီများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများကဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောဤအလင်းကုထုံးပိရမစ်မီးခွက်သည်အဓိကအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ၁၀၀၀၀ ကိုကာကွယ်ပေးသောရောင်စဉ်အလင်းရောင်အပြည့်ပေးထားသောထူးခြားသောအကွက်ကျကျဒီဇိုင်းသည် Luxor အားမည်သည့်အိမ် (သို့) ရုံးတွင်မဆိုပေါ်လွင်စေသည်။ 45w တုန်ခါမှုမရှိသော CFL ပါဝင်သည်။ curly မီးသီး ) ထိရောက်မှုရှိပြီးတောက်ပ။ သာယာသောအလင်းကိုပေးသည်။
ပိရမစ်ပုံသဏ္န်သည်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အနုပညာထက်ပိုသာသည်။ အီဂျစ်လူမျိုးများနှင့်အခြားအစောပိုင်းယဉ်ကျေးမှုများအတွက်ပိရမစ်များသည်အနာကျက်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ တောက်ပသောအလင်းရောင်သည်တစ်နေ့တာလုံးစိတ်ခံစားချက်နှင့်ခွန်အားကိုမြှင့်တင်ရန်ဆေးခန်းတွင်လေ့လာခဲ့သည်။ Luxor သည်နှစ်ခုကိုသင်၏အဆုံးစွန်သောဆောင်းရာသီဘလူးဖြေရှင်းချက်ထဲသို့ပေါင်းစပ်လိုက်သည်။ သေးငယ်သည့်ယူနစ်များမှ ၁၀၀၀၀ ပြည့် Lux ကိုလက်ခံရန်ခက်ခဲသည်၊ သင်အလွန်ထိုင်ရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏မျက်လုံးများသည်ယူနစ်၏ရှေ့တွင်တိုက်ရိုက်ရှိရမည်။ ကြီးမားသောပိရမစ်ပုံသဏ္န်သည်ဤအရာကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
မင်းကမီးလုံးနဲ့ပိုတူတဲ့ရပ်နေတဲ့အလင်းကုထုံးသေတ္တာကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Northern Light Technologies ကိုစဉ်းစားပါ။ မတ်တပ်မီးအိမ် မရ။
The Luxor: 10,000 Lux Light Therapy Pyramid, White သတင်းအချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုရှာပါ။
၂. ၂၀၁၈ ခုနှစ် HappyLight Touch အသစ်
၎င်းသည် LED မီးသီးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်အစားထိုးရန်လိုမည်မဟုတ်ပါ
၎င်းသည်သေးငယ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သင်၏သည်းခံစိတ်ကိုတည်ဆောက်ပြီးသည်နှင့်တစ်နေ့လျှင်မိနစ် ၆၀ အထိကြာမြင့်စွာသုံးရန်လိုပေမည်။
သင်ဟာ Migraine ခေါင်းကိုက်တတ်တဲ့သူဆိုရင်သတိထားပါ။ အလင်းဖြန့်ရန်ပိုကြီးသောမျက်နှာပြင်အကျယ်ပါ ၀ င်သောပိုကြီးသော device ကိုသင်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်
အစီရင်ခံထားသောယူနစ်များ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းပျက်သွားသည်
မင်းရဲ့အလုပ်များတဲ့ဘ ၀ အတွက်လှပသေသပ်သော၊ ခေတ်မီပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ Verilux HappyLight Touch သည်မည်သည့်ရုံး (သို့) အိမ်တွင်မဆိုကြိုဆိုပါသည်။ LED, UV-Free နှင့် spectrum light အပြည့်ပေးသောအလင်းရောင်ကုထုံးအတွက်အကြံပြုထားသော 10,000 lux-အလင်းအဆင့်-ပြင်းထန်မှုကိုပေးသည်။ မထိုးဖောက်ရ၊ ဆေးမပါ၊ နေရောင်ခြည်မလုံလောက်မှုကိုအနိုင်ယူရန်ပတ် ၀ န်းကျင်သယ်ဆောင်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောတက်ဘလက်ကဲ့သို့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အိုင်တီအခန်းကဘာလဲဆိုတာကိုရွေးပါ။ one-touch timer တစ်ခုသည်အသုံးပြုသူအားရွေးချယ်စရာလေးမျိုးကို ၁၅-၆၀ မိနစ်ကြားအချိန်ပေးနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုအတွက်စွမ်းအင်ကိုသတိရှိစေသည်။ HappyLight Touch တွင်သုံးစွဲသူများသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် one-touch ချိန်ညှိနိုင်သောတောက်ပမှုသုံးချက်ပါရှိသည်။
မော်ဒယ်သစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ HappyLight Touch ၏ပုံစံသစ်ကိုစတင်လိုက်ပါပြီ။ ဤပိုခေတ်မီသောစက်သည်အရောင်ညှိရန်ပူနွေးသောအဖြူရောင် (သို့) နေ့အလင်းရောင်ကိုချိန်ညှိပေးသည်။ လူတိုင်း၏အလင်းရောင်ခံစားနိုင်စွမ်းသည်မတူညီဘဲမူလသင်နှစ်သက်သောစရိုက်လက္ခဏာများဖြစ်သောကြောင့်အလင်းအားသုံးမျိုးလည်းရှိသည်။
သင်ဟာအမှတ်တံဆိပ်တူ၊ သဘောတရားတူ၊ ပိုကြီးတဲ့သူပဲ၊ ဒါက HappyLight အရွယ်အစားအပြည့်အစုံ မင်းအတွက်။
ပိုသေးငယ်တဲ့အရာအတွက်၊ ကြိုးစားကြည့်ပါ HappyLight Compact မရ။
HappyLight Touch 10,000 Lux LED One-Touch ကုထုံးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုရှာပါ။
၃။ Northstar 10,000: တောက်ပသောအလင်းရောင်ကုထုံးသေတ္တာ - Alaska Northern Lights မှ 10,000 Lux
စျေးနှုန်း: ၂၉၉.၇၇ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
တိတ်ဆိတ်တယ်။ ၂၅၀၀၀ hertz electronic ballast တုန်ခါမှုသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းမရှိပါ။
လူတွေကအဲဒါကို 'ပြောင်းလဲခြင်း' နဲ့ 'လုံးဝထိုက်တန်တဲ့စျေး' လို့ခေါ်ကြတယ်။
Northstar 10,000 သည်အထင်ကြီးစရာ ၂ ပေတွင် ၁၀၀၀၀ ပြည့်သော lux ကိုပြသသည်၊ ၎င်းသည်စျေး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သေးငယ်ပြီးမှိန်ဖျော့သောသေတ္တာများသည် ၆ မှ ၁၂ လက်မအထိ ၁၀၀၀၀ lux ကိုထုတ်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ကိရိယာ၏ရှေ့တွင်သင်၏မျက်နှာရှိရန်လိုအပ်သည်။ Northstar တွင်ပြင်းထန်သောအလင်းကိုအလင်းကုထုံးကုသနေစဉ်သင်၏မျက်စိကိုကာကွယ်ရန်နိမ့်ကျသော prismatic light diffuser ဖြင့်ဖြန့်သည်။
အလယ်အလတ်လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံး၏အရွယ်အစား၊ ဤသေတ္တာကို ၇ နှစ်အာမခံနှင့် ၁၀၀ ရက်အန္တရာယ်ကင်းသောငွေပြန်အမ်းခြင်းတို့ဖြင့်ရက်ပေါင်း ၆၀ စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်ဆရာဝန်ကအကြံပြုသည်။ ၎င်းကိုအမေရိကန်တစ်ဝှမ်းရှိ VA ဆေးရုံများတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။
Northstar ကိုသံမဏိနှင့်တည်ဆောက်ထားပြီးနောက်ဆုံးပေါ် UV ရောင်ခြည်နှင့်အပြာရောင်အလင်းတန်းများမပါသောကျယ်ပြန့်သောမီးသီး ၂ လုံးကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါဟာအပြည့်အဝပါပဲ UL စာရင်းဝင်သည် ထိရောက် SAD မီးလုံးအလင်းရောင်ကုထုံးအတွက်လက်တွေ့စံနှုန်းများကိုကျော်လွန်သည်။
သက်တောင့်သက်သာနိမ့်ကျသော prismatic light diffuser သည်သင်၏မျက်စိကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ပိုကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုရှာနေတာလား။ Alaska Northern Lights များသင့်အားဖုံးလွှမ်းထားသည်။ Aurora LightPad Max လက်မ ၃၀ တွင်ပြန့်ကျဲနေသော 10,000 lux ရှိသူတို့၏အကြီးမားဆုံး၊ အတောက်ပဆုံး LED မီးကုထုံးသေတ္တာဖြစ်သည်။
Alaska Northern Lights ၏ Northstar 10,000 Lux သတင်းအချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဗွီဒီယိုnorthstar 10,000 နှင့်ဆက်စပ်သောဗွီဒီယို၊ တောက်ပသောအလင်းရောင်ကုထုံးသေတ္တာ2018-09-24T15: 51: 17-04: 00
4. 15,000 Lux, A5-Size, Health for Happy Natural Sun Lamp-အဖြူရောင်
စျေးနှုန်း: ၃၃.၅၅ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
Dial သည် stepless dimming options ကိုခွင့်ပြုသည်
ထို့ကြောင့်သင်အကြံပြုထားသောကုထုံးအလင်းပြင်းအားသည် ၁၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်ကိုသင်မှတ်မိသည်။ ဒါအများစုအတွက်ကောင်းတယ်။
ဤ A5 အရွယ် SAD မီးသည်လုံခြုံစိတ်ချရသော ၅၅၀၀K အရောင်အပူချိန်ဖြင့် ၁၅၀၀၀ lux ဖြင့်ရောင်စဉ်အပြည့်ထုတ်လုပ်သည်။ ပြင်းထန်သောရာသီစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်း၊ ဂျက်နောက်ကျခြင်း (သို့) အလုပ်ပြောင်းခြင်းကိုကူညီပါ။ နှင်းကျလျှင်သို့မဟုတ်မိုးရွာလျှင်သင်၏စိတ်အခြေအနေနှင့်စွမ်းအင်အဆင့်များကိုတိုးတက်စေရန်အတောက်ပဆုံးသဘာဝနေရောင်ခြည်အချို့ပေးပါ။
တောက်ပသောအလင်းရောင်သည် UV မပါဘဲထို့ကြောင့်ရေရှည်ထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများမပါဘဲ၎င်းသည်နေ၏အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးဖြစ်သည်။ အလင်းရောင်ဧရိယာသည်၆.၆ × ၄.၁/လက်မ
၁၅၀၀၀ သည်သင့်အတွက်အမြဲတောက်ပလွန်းလျှင် stepless dimmer သည်တောက်ပသောချိန်ညှိချက်များကိုညှိခွင့်ပြုသည်။ ဒါပေမယ့်ရွေးချယ်ခွင့်ရတာမကောင်းဘူးလား။
နောက်ထပ် 15,000 Lux, A5 -Size, Happy Natural Sun Lamp - အဖြူရောင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ရှာပါ။
5. TL100: 2-in-1 Sun Lamp/Mood Light နှင့် LightUp အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အရောင် ၂၅၆ မျိုး
စျေးနှုန်း: ၁၀၂.၉၉ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
dimmer & sleep timer တို့ပါ ၀ င်သည်
ဘက်စုံသုံးပစ္စည်းများ၊ အလင်းကုထုံးသေတ္တာနှင့်စိတ်ခံစားချက်အလင်းရောင် ၂၅၆ ရောင်တို့ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်
ဤအလင်းရောင်ဓာတ်မီးသည်တိမ်ဖုံးသောနေ့များတွင်သင့်အားနေရောင်ခြည်အနည်းငယ်ပိုပေးသည်။ ဤစာရင်းမှအခြားမီးများကဲ့သို့၎င်းသည်သင်၏အိပ်ချိန်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် melatonin ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောစိတ်ဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
TL100 သည်အားကောင်း။ ခေတ်မီသော LED မီးကြောင့်ဤသေးငယ်သောနေရာ၌ lux 10,000 ကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ LCD နှင့်ယှဉ်လျှင် LED မီးသည်ပိုမိုတောက်ပပြီးပိုတောက်ပသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
SAD မီးခွက်အချို့ကမင်းအတွက်တစ်ခုပဲလုပ်နိုင်တယ်။ ဤနေရောင်ကဲ့သို့စက်ဝိုင်းသည်အလင်းရောင်ကုသမှုမခံယူသည့်အခါသင်၏အိမ်ကိုအလင်းရောင် ၂၅၆ ရောင်ဖြင့်စိတ်ခံစားချက်အလင်းရောင်အဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်သည်။
မင်းရဲ့စမတ်ဖုန်းပေါ်က Beurer LightUp app ကနေမင်းရဲ့ setting အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အားမနာပါနဲ့။
LightUp အက်ပ်အချက်အလက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများဖြင့် TL100: 2-in-1 Sun Lamp/Mood Light ကိုဤနေရာတွင်ရှာပါ။
အကောင်းဆုံးကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အကောင်းဆုံး ၁၀ မျိုး
ဈေးပေါသောပရိုတိန်းအမှုန့်လမ်းညွှန်၊ နှိုင်းယှဉ်၊ ဝယ်ပါ၊ (၂၀၁၉)
ကယ်လိုရီ ၁၀၀ ပြည့်ဝသောအဆာပြေသရေစာများ
Methylprednisolone vs. prednisone: ခြားနားချက်များ၊ တူညီခြင်းနှင့်ပိုကောင်းသည်
အာမခံကိုနုတ် ယူ၍ အိတ်ဆောင်ထဲမှမည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း